यो शहर निष्ठुरी रहनेछ! - Blogs of Sagar Prasai
यो शहर निष्ठुरी रहनेछ!
म अस्तिको दिन घर पुग्दा साँझ भैसकेको थियो। बिहान हिड्दा राम्रो छोडेर हिडेको मेरो घर छिर्ने बाटो, दिउँसो मेलम्ची खानेपानीको पाईप हाल्नको लागी खनेर बेहाल पारिएको रहेछ। व्हिलचियरको कुरा छोडौँ, एकसाईडबाट मान्छे हिड्ने बाटो नि थिएन। म त्यहाँ पुगेपछि, त्यहाँका चिया पसलका, किराना पसल का र वरीपरीका मान्छे भेला भएर- अब कसरी जाने भन्ने जिज्ञाशा गरे। मेरो भाई कुनै उपाय छ कि भनेर बाटो निरिक्षण गर्न गयो। एकछिन मा फर्किएर भन्यो- यहाँ बाट त जान केहि गरी सम्भव छैन।
अब मलाई आपत पर्यो। घर नगएर त्यति राती कहाँ जाने? मैले सबैसँग भने- घर त जानै पर्यो नि, अब के गर्ने होला। म साच्चिकै निराश थिएँ।
सबैले भने- नआत्तिनुस भाई, हामी जसरी पनि तपाईँँलाई पुर्याएरै छोड्छौँ।
चिया पसलकी दिदिले पनि आफ्ना चिया खाईसकेर निस्कन लागेका ग्राहकलाई- ल है भाईहहरू वहाँलाई घर पुर्याएर मात्र जानु होला भनेर अनुरोध गर्नुभयो।
मेरो भाई र अरु एकदुई जना अन्य कुनै वैकल्पिक बाटो छ कि भनेर जाँच्न हिडे। केहि बेर पछि उनिहरू फर्किए- उनीहरूले बाटो त भेटेछन् तर त्यो बाटो, अरुको घर भित्र, प्यासेज हुदै जाने र मेरो घरको भन्दा अघिल्लो घरको गेट अगाडी निस्कने रहेछ। त्यहाँ बाट चाहि बोकेर जनाे निधो भयो। त्यो बाटो सजिलो त थिएन, तर अरू पनि त थिएन।
त्यसपछि वरीपरीका केहि मान्छे र मेरो भाईको सहयोगमा म निस्के- यो नया र अफ्ट्यारो यात्रामा। गन्तब्य थियो- मेरो घर।
हामीले चिया पसल भित्र बाट भित्र छिर्यौँ र अरुका घरका प्यासेजमा छिर्यौँ। जहाँ जहाँ पुग्यौँ, त्यहाका मान्छेहरूले आफ्ना सामानहरू पन्छाई दिएर व्हिलचियरको लागी बाटो बनाईदिए। त्यहाँबाट अफ्टेरो गरेर अगाडी गेटमा निस्केपछि, सबैले भएर मेरो व्हिलचियर सहित मलाई उचालेर मेरो घर पुर्याईदिए।
मैले सबैलाई धन्यवाद दिए। र अन्त्यमा- दुख-सुख जे गरेर भए पनि म मेरो घर पुगे।
भन्छन् नि- यो काठमाडौँमा कसैलाई कसैको मतलब छैन। तर मैले त्यो दिन बुझे- त्यसो हैन रहेछ। आपत- बिपतमा एकजनाले अर्कोलााई सहयोग गर्ने नै रहेछ। यो शहर सबैले भनेजस्तो त्यसतो निष्ठुरी पनि रहनेछ।